ShweMinThar: February 2008
:) 0r :(
လူ့စစ်တမ်း (ခြိမ့်နိုင် )
သိက္ခာ ပွန်းပဲ အညွန့်မသန်
လိပ်ပြာ အလှမဲ့ အကျည်းတန်
I think of you often……I do,
From morning ’til evening I do,
From the love we’re share dearly.
For we’ve come so far and there’s so much to come
For the life we will live…….together.
Be sure that what makes you cry.
So let’s stir up our passion today,
ချောင်းတွေမြစ်တွေ မလိုချင်တဲ့ အရာကိုပါ
ပင်လယ်ဆိုတာ ငါးသတ္တ၀ါတွေရဲ့ ပျော်စံရာပါ.....
ချောင်းက စသလား ၊မြစ်ကစသလား
(၁) သင့်တင့်မျှတသော အစားအစာများစားပါ။
(၃) အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းမှာ စာဖတ်ပါ။
(၄) ဆယ်စက္ကန့်တစ်ခါ မျက်တောင်ခတ်ပါ။
(၅) မနက်အိပ်ရာထလျှင် ရေကြက်သီးနွေးနှင့် မျက်စိမှိတ်ထားပြီးဖျန်းပေးပါ။ ငါးကြိမ်မှ ဆယ်ကြိမ်အထိ ဖြန်းပေးပါ။
(၆) မျက်လုံးလေးတွေမှိတ်ပြီး မျက်ခွံလေးများကို လက်မနဲ့ လက်ချောင်းကလေးများနှင့် ခပ်ဖွဖွနှိပ်နယ်ပေးပါ။မျက်ခွံအောက်နဲ့ ပါးရိုးအပေါ်မှာ ခပ်တင်းတင်းလေးနှိပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
(၇) အာရုံစူးစိုက်မှုကောင်းစေရန် သင့်နှာခေါင်းပေါ်မှ ၁၅ စင်တီမီတာအကွာတွင် ခဲတံတစ်ချောင်းထား၍ ကြည့်ပါ။ ပြီးရင် လက်တစ်ကမ်းအကွာထားပြီးကြည့်ပါ။ စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာလျှင် မျက်စိမှိတ်လိုက်ပါ။ပြီးရင် ပြန်ကြည့်ပါ။ ဤလေ့ကျင့်ခန်းကို ငါးမိနစ်ခန့်လုပ်ပါ။
(၈) မျက်စိကို အနားပေးရန် ကြမ်းပြင်ပေါ်ထိုင်ချလိုက်ပြီး တံတောင်ဆစ်နှစ်ဖက်ကို စားပွဲပေါ် ထောက်၍ မျက်လုံးနှစ်ဖက်ကို လက်ဖ၀ါးနှင့် အုပ်ထားပါ။ ဖြည်းညှင်းစွာ အသက်ရှူသွင်း ရှူထုတ်လုပ်ပါ။ မျက်စိညောင်းလာပါက ၅မိနစ်မှ ၁၀မိနစ်အထိလုပ်ပါ။
(၉) မျက်လုံးလေးများကို နာရီလက်တံအတိုင်းလှည့်ကြည့်ပါ။ ပြီးရင်နာရီလက်တံပြောင်းပြန် လှည့်ကြည့်ပါ။
(၁၀) မျက်လုံးများကို ညာဘက်မှ ဘယ်ဘက်၊ ဘယ်ဘက်မှ ညာဘက် အထက်အောက်လှည့် ပြီးကြည့်ပါ။